Dhowr ‘Been’ oo uu Trump Sheegay oo Bannaanka Lasoo Dhigay |
Dhowr ‘Been’ oo uu Trump Sheegay oo Bannaanka Lasoo Dhigay
Madaxweyne Trump ayaa jeediyay khudbaddiisii saddexaad ee sannadlaha ahayd, taasoo uu ka hor akhriyay labada aqal ee baarlamaanka Mareykanka, wuxuuna ka hadlay waxa uu ugu yeeray “natiijooyin cajiib ah” oo ku saabsan “dib usoo noqoshahada wanaaggii Mareykanka” intii uu isagu xilka madaxtinnimada hayay. Wuxuu sheegay dhowr qodob oo la xiriira arrimihii u qabsoomay xiliga uu xafiiska joogay, laga billaabo shaqooyinka loo abuuray bulshada, adeegyada caafimaadka ilaa arrimaha ku qotoma dadka soo galootiga ah ee sharcidarrada ku taga waddankaas.
Sheegasho: “Waxaan abuurnay toddoba malyan oo shaqo… tirada shaqo la’aantuna waxay gaartay heerkii ugu hooseeyay muddo qarni barkiis ah”.
Xaqiijinta wixii run ama been ah: Tan iyo markii uu Mr Trump xilka la wareegay bishii January ee sanadkii 2017-kii, ku dhawaad 6.7 malyan oo shaqooyin cusub ah ayaa la abuuray. Laakiin shaqooyinka waxay kor usii socdeen bil kasta tan iyo bishii October ee sanadkii 2010-kii, xilligaasoo uu Mareykanka madaxweyne ka ahaa Barack Obama.
Tirada shaqo la’aanta waxay bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay ahayd 3.5%. Waa hoos u dhicii ugu yaraa ee la arko muddo 50 sano gudaheed ah – markii ugu dambeysay ee ay shaqa la’aanta gaarto 3.5% waxay ahayd bishii December ee sanadkii 1969-kii.
Sheegasho: “Tirada dadka shaqo la’aanta ah ee kasoo jeeda Mareykanka Madow, Mareykanka ku hadla af Spanish-ka iyo Mareykanka asalkoodu yahay qaaradda Aasiya waxay gaartay hoos u dhicii ugu yaraa ee taariikhda lagu arko”.
Xaqiijinta wixii run ama been ah: Tirada shaqo la’aanta ah ee dadka Mareykanka Madow ah iyo kuwa ku hadla luuqadda Spanish-ka waxay gaartay 5.5% iyo 3.9 boqolkiiba – sida ay isugu xigaan, bishii September ee sanadkii 2019-kii – waana hoos u dhacii ugu yaraa ee la diiwaan galiyo tan iyo markii ay howlaha diiwaan galinta billowday waaxda xog aruurinta shaqaalaha ee Mareykanka, sanadihii 1970-meeyadii.
Xaddiga shaqo la’aanta ee labadan qowmiyadood wuxuu si tartiib ah sare ugu kacayay tan iyo bishii September, haddana waa 5.9% oo ah Mareykanka Madow iyo 4.2% oo ah Mareykanka ku hadla luuqadda Spanish-ka.
Laakiin tirada shaqo la’aanta ee dadka Mareykanka ah ee kasoo jeeda qaaradda Aasiya waxay taagan tahay halkii ay taagneyd bishii December ee sanadkii 2006-dii oo ah 2.5%, waxna iskama baddalin. Sanadkaas horaantiisii ayey gaartay hoos u dhacii ugu hooseeyay abid oo ah 2.1%.
Hase yeeshee, dhammaan tirooyinka aan xusnay waxay dib ugu laabanayaan sanadkii 2003-dii.
Trump ayaa rajeynaya in kobaca dhaqaalaha ee kordhay intii uu xilka hayay uu sababi doono in dib loosoo doorto
Sheegasho: “Waxaan sidoo kale ballanqaad adag u sameeyay qoysaska Mareykanka ah, waxaana u sheegay inaan ilaalin doonno adeegga caafimaad ee bukaannada ay xaaladdooda horay usoo jirtay ceymiska caafimaadka ka hor”.
Xaqiijinta wixii run ama been ah: Arrintani run ma aha – Mr Trump waa laga yaabaa inuu ballanqaad sameeyay laakiin ballanqaadkiisa ma ahayn mid sida uu sheegayo ku qotomay.
Adeegyada loogu talagalay bukaannada ay xaaladdooda caafimaad darro sii jirtay inta aysan ceymiska galin ka hor waxaa lagu soo daray barnaamijkii caafimaadka ee uu la yimid Madaxweyne Obama, kaasoo ahaa mid kharashkiisa la awoodi karo. Xeerka barnaamijkaas wuxuu shirkadaha ceymiska caafimaadka ka mamnuucayay inay diidaan qaabilitaanka dadka horay usii qabay dhibaatooyin caafimaad.
Sharciyadan waxay dhaqan galeen 1-dii bishii January ee sanadkii 2014-kii.
Laakiin Madaxweyne Trump wuxuu doorashada ku soo galay ol’ole uu ku ballanqaaday inuu buburin doono sharciga dadkaas adeegyada caafimaad u sameynayay, oo loo yaqaannay Obamacare.
Mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu horreeyay ee uu Mr Trump qaaday markii uu xafiiska la wareegay waxay ahayd inuu baabi’iyo barnaamijkaas.
Sheegasho: “Sanadkii lasoo dhaafay, markii ugu horreysay muddo 51 sano ah waxaa aad hoos ugu dhacay qiimaha dawooyinka ay dhakhaatiirta soo qoraan”.
Xaqiijinta wixii run ama been ah: Ilaa bishii May ee sanadkii 2019-kii qiimaha celceliska ah ee bishiiba lagu bixiyo dawooyinka lasoo qoro wuxuu hoos ugu dhacay 0.2%, sida laga soo xigtay waaxda diyaarisa xogta adeegyada la isticmaalo ee Mareykanka, oo magaceeda loosoo gaabiyo CPI, taasoo sidoo kale qiimeysa kororka qiimaha qalabka lagu isticmaalo guryaha.
Laakiin habkan ma noqon karo kan ugu wanaagsan ee lagu qiimeyn karo kharashka dawooyinka, sida ay sheegtay Inma Hernandez, oo cilmiga iibinta dawooyinka ka dhigta jaamacadda Pittsburgh.
“Waaxda CPI waxay xogteeda ku saleysay dawooyin badan oo la isku qabtay xisaab ahaan, kuwaasoo sidoo kalena looga tusaale qaatay dawooyinka kale ee la midka ah oo dhan. Sidaas darteed waxay xoogga saartay dawooyinka ugu badan ee sida joogtada ah loo isticmaalo, kuwaasoo badanaa raqiis ah”, ayey tiri.
Sheegasho: “Tirada dadka sida sharcidarrada ah u soo tallaaba waxaa ku yimid hoos u dhac dhan 75% tan iyo bishii May – waxayna hoos sii aadeysay muddo 8 bilood oo xiriir ah”.
Xaqiijinta wixii run ama been ah: Madaxweyne Trump wuxuu qodobkan uga hadlayay dadka qaxootiga ah ee sida sharcidarrada ah uga gudba xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico. Wuu ku saxan yahay wakhtigan uu sida gaarka ah u xusay ee ka midka ah sanadkii 2019-kii.
Ka tallaabista xuduudda waxaa lagu xisaabaa dadka ay qabtaan ciidamada Mareykanka, xilliga ay isku dayayaan inay Mareykanka ugu tallaabaan si sharci darro ah.
Dadka la qabto waxay hoos u dhaceen 75% tan iyo bishii May, iyadoo xilligaas in ka badan 130,000 oo ruux lagu qabtay xadka dhinaca koonfureed.
Tani waa tiradii ugu badneyd ee dadka la qabtay ilaa bishii March ee sanadkii 2006-dii.
Intii uu xilka hayay madaxweyne Trump oo u dhaxeysay (2017-kii ilaa 2019-kii) tirada dadka lagu qabto xadka koonfureed sare ayey usii kaceysay, waxaana laga yaabaa inay sabab u tahay (ciidamada dheeraadka ah ee halkaas la geeyay), tirada sanadkii lasoo dhaafay la qabtayna waa tii ugu badneyd tan iyo 2007-dii.
Sheegasho: “Ka dib markii ay burbureen 60,000 oo warshadood intii ay jireen labadii maamul ee hore, Mareykanka wuxuu hadda dib u helay 12,000 oo warshado cusub ah”.
Xaqiijinta wixii run ama been ah: Warshadaha sida gaarka ah loo leeyahay ee Mareykanka ka abuurmayay sanadkii 2016-kii waxay 54,000 oo warshadood ka yaraayeen kuwii abuurmayay sanadkii 2001-dii, sida laga soo xigtay waaxda xog aruurinta shaqaalaha ee Mareykanka.
Marka la eego warshadaha soo kordhay intii uu xilka hayay madaxweyne Trump, xog aruurintii ugu dambeysay ee la sameeyay waxay muujisay in sanadkii 2019-kii ay abuurmeen 12,000 oo warshadood oo cusub, kuwaasoo ka badan tiradii jirtay maarkii uu madaxweyne Trump xafiiska la wareegay 2017-kii.
Laakiin in badan oo ka mid ah warshadahan waa ganacsiyo yar yar oo shaqaalahooda ay ka hooseeyaan shan ruux.
Kororka tirada warshadaha Mareykanka wuxuu billowday sanadkii 2013-kii, xilligaasoo uu jiray maamulkii Obama.